Iindaba eNigeria nangaphaya: uHarvey Weinstein Isazela, uHazard + Ngakumbi
HU-arvey Weinstein ufunyenwe enetyala, usapho lwebhola ebhujelwe lithetha phandle, i-Edene Hazard yalimala kwakhona. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UHarvey Weinstein unetyala ngokuhlaselwa ngokwesondo
Owayesakuba ngumvelisi webhanyabhanya UHarvey Weinstein Ufunyenwe enamatyala amabini kwityala lakhe lokuhlaselwa ngokwesondo. Ugwetywe ityala elincinci lokudlwengula ngenqanaba lesithathu kunye nesenzo solwaphulo-mthetho ngokwesondo kwinqanaba lokuqala. Kodwa uWeinstein, 67, ugwetywe kwezona zityholo zinzulu kakhulu ngaye - zokuhlaselwa ngokwesondo nokudlwengula ngenqanaba lokuqala.
Usabhekene nezityholo eLos Angeles zokudlwengula kunye nokuhlaselwa kwabasetyhini ngo-2013. Bangaphezulu kwe-80 abafazi, kubandakanya abadumileyo abaziwayo, ababemtyhola ngokuziphatha okubi ngokwesini ukubuyela kumashumi eminyaka.
UHarvey Weinstein ngewayesijonge isigwebo sobomi esinokuthi ukuba wafunyanwa enetyala lokuhlaselwa ngokwesondo, kodwa uhleli ejongene neminyaka engama-25 ejele. Umgwebo wamadoda asixhenxe kunye nabafazi abahlanu bafikelele kwisigqibo sabo ngoMvulo, umhla wesihlanu wengxoxo.
2. Unyana wethu wabulawa, usapho lwababulali beSagamu abagxibha ibhola
Ukuhamba kwexesha Kazeem Tiamiyu
Usapho lukaKapteni weKlabhu yeBhola ekhatywayo yeBhola ekhatywayo yeBhola eKhatywayo yaseMajukujukwini, Kazeem Tiamiyu, odume ngokuba nguKaka, uziphikisile iingxelo zakwangoko malunga nesityholo sokubulawa konyana wabo okhululwe liPolisa laseNigeria.
Banyanzelisa ukuba uKaka atyholwa ngokubulawa kwangomgqibelo ngamanye amashishini eSpecial Anti-Robbery squad eqhotyoshelwe kwi-Ogun State Command Command ku-Sagamu-Abeokuta Road kwaye afuna ubulungisa.
Ngokwengxelo yeendaba ekhutshwe yi-Club, uKaka wathatyathwa ngabantu abasebenza kwi-SARS kwindlela egodukayo evela kuqeqesho kunye neqabane, kwisityholo sokuba bangabaphangeli be-intanethi. It Kwaxelwa ukuba uKaka, emva kokuzazisa njengomntu obambe ibhola wanyanzeleka ukuba akhwele kwimoto yakwa-SARS kwaye watyakatywa yimoto ezayo, eyakhokelela ekufeni kwakhe.
Usapho luthi urhulumente wase-Ogun State kufuneka aqinisekise ukuba ababuleli bebhola ekhatywayo baziswa ezincwadini. Usapho lwenze le nto kwingxelo esayinwe ngabameli babo Adegbesan Adenola Esq., Ogunsanmi Abisoye Isq. Isithethi UGaniyu Tiamiyu.
Usapho, kwingxelo, lukwachaze ukubulawa kukaKaka njengo "Kucaciswa ukubulawa komncinci, ethembisa nangokunyuka kwenkwenkwezi ngamagosa athile angengomthetho nabangenamthetho. "
3. Intatheli yophando yaseTanzania ikhululwe emva kweenyanga ezisixhenxe
U-Erick Kabendera yintatheli ehlonitshwa ngokubanzi
Intatheli yophando yaseTanzania Erick Kabendera ukhululwe emva kokuchitha malunga neenyanga ezisixhenxe emva kwebar. Ukukhutshwa kukaKabendera kuza emva kokuba engene kwisivumelwano sokuxoxwa kwezityholo kunye nomtshutshisi. Kwambona efunyanwa enetyala lokubalekela irhafu kunye nokuxhaphaza imali, ngelixa izityholo ezayamene nolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo ziyehliswa.
Kwityala lokubaleka irhafu, wavuma ukuhlawula i-75,000, 58,000 yeedola (iirandi ezingama-43,000) kwisithuba seenyanga ezintandathu. Kwimali yokuhlawula imali, sele ehlawule imali engange- $ 108. Kwafuneka ahlawule i- $ XNUMX yokukhutshwa kwakhe kwangoko.
I-Amnesty International yayikade ichaza ukubanjwa kwayo njengo "kuhlaselo kwinkululeko yeendaba", kodwa urhulumente unyanzelisa ukuba lizibophelele kwinkululeko yenkululeko.
Intatheli le, enedumela lokugcina abasemagunyeni ukuba banike ingxelo kumanqaku akhe, ibhalelwe iimpapasho zaseBritani ezahlukeneyo, kubandakanya i-Independent, Guardian kunye ne-Times, kunye namaphephandaba e-Tanzania nakwindawo ebanzi.
4.Izothuko zenzakala njengendoda yaseJamani 'ngamabomu' ngenqama kwinqwelo yabantu
Amapolisa awakwazanga ukunika ezinye iinkcukacha kwaye abongoza abantu ukuba bangazisasazi 'iingxelo ezingagunyaziswanga' malunga nesi sigameko
Indoda ngamabom yakhwela inqwelo-mafutha kwisiXeko saseJamani iVolkmarsen, yenzakalisa abantu abaninzi, amapolisa athi. Umrhanelwa, ummi waseJamani oneminyaka engama-29, wabanjwa.
Isithethi samapolisa NguHenning Hinn Ukuqinisekisile ukuba ingozi yangoMvulo yayenziwe ngabom, yongeza: “Abanye abaliqela baye benzakala, phakathi kwabo abanye baba buhlungu kakhulu kwaye lusizi nabantwana. ”
Akazange anikeze zinkcukacha zongezelelweyo malunga nesizathu esinokubakho. Umphathi wamapolisa waseFrankfurt UGerhard Bereswill Kucatshulwe kusasazo I-media yendawo ukuba abantu abangama-30 bonzakele, abasixhenxe kubo abakwimeko emaxongo. Esi siganeko senzeke kwicala elingasemazantsi eVolkmarsen, ngaphandle kwevenkile enkulu.
5. I-Eden Hazard: I-Real Madrid yangaphambili i-fractures i-ankle kwakhona
I-Eden Hazard yenze kuphela ukubonakala kwe-15 kweNene ukususela oko wajoyina ihlobo le-2019
I-Real Madrid iya phambili Ingozi yeEdeni uyaphoswa ngoLwesithathu we-Champions League yokugqibela-ye-16 ngokubambana neManchester City emva kokuqhekeka iqatha. UHazard, oneminyaka engama-29 ubudala, waphulukana nesiqingatha kwisiqingatha sesibini sokulahleka kweLa Liga ngo-1-0 kwiLevante ngoMgqibelo.
I-Belgian ibuyele kwisenzo kwiveki ephelileyo emva kokuphoswa phantse iinyanga ezintathu ngokulimala okufanayo.
"Emva kovavanyo, uHazard ufunyaniswe enesifo sokungalunganga kwi-fibula yakhe esekunene eyi-distal,"Isitatimende seklabhu sithe. "Ukuchacha kwakhe kuyaqhubeka nokuvavanywa. ”
Iingxaki zokulimala komdlali wangaphambili waseChelsea zimthintele ukubonakala kwe-15 yeReal ukususela oko wafika evela eStamford Bridge ngehlobo eledlule. Ukulimala kuthetha ukuba i-Hazard ikwenzelwe ukuba iphoswe ngumdlalo ka-El Clasico wangempela we-El Clasico ngokuchasene ne-Barcelona ngo-1 Matshi.
IVeki yeendaba yethu yoSuku lweeVeki ikulethela isishwankathelo sezihloko ezintlanu ezishushu namhlanje eziquka iindaba zakutshanje eNigeria, iindaba zaseAfrika, iindaba zezopolitiko, iindaba zamazwe aphesheya, iindaba zeHollywood, iindaba zemidlalo kunye neendaba zabantu abadumileyo baseNigeria nabadumileyo baseAfrika. Kwakhona, lindela amanye amabali aphezulu kunye nezinye iindaba ezihambahambayo zakutshanje namhlanje eSahara. Isishwankathelo seendaba zakutshanje zaseNigeria namhlanje 202